नेपाल आज | सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ (भिडियोसहित)
सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ (भिडियोसहित)
यो पटक भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख नेपालमा आएर राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेको खबर बाहिरियो । चर्चा पनि निकै भयो, स्वभाविक मान्नुहुन्छ ?
– भारतीय खुफिया एजेन्सीका मानिसले नेपाल भ्रमण गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । नेपालमा पर्यटक भएर, तीर्थयात्री भएर आउन सक्छन् । नेपाल भारतबीच खुला सीमा छ । भारतीयहरु त्यसै पनि आउँछन् जान्छन् । मूल प्रश्न जासुसी संस्थाका मानिसले राजनीतिक सन्देश आदान प्रदान गरे कि गरेनन् भन्ने हो । मलाई के लाग्दैन भने भारतले आफ्नो सन्देश वा कुरा सुनाउनका लागि कुनै जासुस पठाइरहनु पर्छ । नेपालमा भारतको दूतावास छ । दूतावासको एक्सेस सबैतिर छ । भनेपछि मलाई यो लाग्दैन कि कुनै जासुस आएर राजनीतिक भेटवार्ता गरे । खासमा भेटवार्ता भयो, भएन थाहा छैन । मिडियामा कुरा उचालियो । तर कुनै पनि मिडियाले न फुटेज, न फोटो नै सार्वजनिक गर्न सक्यो । नेपाल वा भारतका कुनै आधिकारिक निकायबाट कुनै पुष्टि पनि भएन ।
नेपालमा त नेताहरुले भेट गर्न पनि सक्छन् । प्रोटोकलको ख्याल गरिँदैन भन्ने छ । जस्तो कि भारतका नयाँ विदेशमन्त्रीलाई नेपालमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शुभकामना सन्देश पठाउनु भयो । के भन्नुहुन्छ ?
त्यो शोभायमान होइन । नेपालका विदेशमन्त्रीले शुभकामना सन्देश पठाउन सक्छन् । त्यो ठीकै हो । तर प्रोटोकलको दृष्टिले शेरबहादुर देउवाले सन्देश पठाउनु अमिल्दो कुरा भयो । व्यक्तिगत हिसाबमा पठाउँदा हुन्छ । औपचारिक रुपमा पार्टीको सभापति, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पठाउन राम्रो होइन । प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत त प्रधानमन्त्री बराबर मानिन्छ ।
राजनीतिक तहसँग अर्को देशको जासुसी संयन्त्रको डील हुन सक्छ ?
मूल कुरा त हामी बलियो हुनुपर्छ । हामीले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अरुलाई दोष दिएर काम छैन । भारतको जासुसी संस्थाले नेपालका संयन्त्रसँग सम्पर्क गर्नु स्वभाविक पनि हो । उनीहरुको चासो हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो चासो पनि उनीहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ । रेसिप्रोकल हुनुपर्छ दुवैका लागि ।
नेपाल–भारत, नेपाल–चीन मामिलामा रेसिप्रोकल भएको पाउनु हुन्छ ?
रेसिप्रोकल हुनुपर्छ । भारतले विषादी परीक्षणको केसमा नेपाललाई पत्र पठायो । नेपालले सो पत्रको जवाफ पनि दिन आवश्यक ठानेन । एकातर्फी रुपमा विषादी परीक्षण रोक्यो । यसरी रोक्न हुँदैन थियो । यसो गर्नु भनेको जनताको स्वास्थ्य, अधिकारसँग सरकारले गरेको अत्याचार हो । भारतले उतै परीक्षण गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्नु पर्छ भन्दैमा हामीले विषादी परीक्षण रोक्न आवश्यक थिएन । कुनै सन्धिहरुका कारण तनाव भयो भने खारेज गर्न सकिन्छ । १९५० कै सन्धी एक वर्षको सूचनामा खारेज गर्न सक्छौं । कुनै कारणले हामीलाई समस्या भयो भने विकल्प सोचेर सन्धि संशोधन गर्नुपर्छ ।
जनताको अधिकार हनन् सरकारले नै गरेको तपाईंको दावी छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई खुसी बनाउन गठन भएको हो वर्तमान सरकार भन्नु भएको छ नी ? कुरा विरोधाभाष भएन ?
निश्चित रुपमा विरोधाभाष भएको छ । उहाँको बोली र व्यवहारमा फरक छ । गुठी विधेयकमा हेर्नुस्, कस्तो गर्न खोजेको थियो सरकार । अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि त्यस्तै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रावधानहरु छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि त्यस्तै भएको छ ।
हालको दिनमा भारतको चासो नेपालमा के के होलान् ?
भारतको पहिलो चासो भनेको नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा हो । यो ब्रिटिस इन्डियाकै पालादेखि नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा भारतको चासो हो । भारतमा प्रधानमन्त्री आइके गुजराल भएको बेलामा उनले छिमेकी मुलुकहरुले पनि भारतबाट लाभ पाउनु पर्छ । भारतले मात्रै लाभ पाउने नीतिले क्षेत्रीय असन्तुष्टि पैदा हुन्छ भन्ने मान्यता अघि सारे । छिमेकीले पनि लाभ पाउँदा पाकिस्तान बलियो हुने देखेर उनीहरुले त्यो नीति परित्याग गरे । भारतले सबै छिमेकीसँग लाभ लिन्छ । भारत आफ्ना छिमेकीहरुका लागि अपरिहार्य भूगोलमा छ । यसको लाभ उसले पाएको छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति भनेको समदूरीको हो । तर बेला बेला नेपाल चीनतिर ढल्केको, भारततिर ढल्केको भन्ने चर्चा हुन्छ के भन्नु हुन्छ ?
यस्तो भारतमा पनि हुन्छ । चिनियाँहरुले पनि शंका गर्छन् । एक हप्ताअगाडि भारतमा नेपाल–भारतसम्बन्धबारे ठूलो गोष्ठी भयो । त्यहाँ एसडी मुनी, श्यामशरण, रञ्जिर रेलगायत थिए । उनीहरुले नेपाल चीनतिर ढल्केको प्रतिवेदन पेश गरे । हामीलाई चीनतिर ढल्किन बाध्य कसले बनायो त ? भारतले नै बनाएको हो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यो युद्ध सरह हो । एकातर्फीरुपमा नेपालमाथि युद्ध घोषणा भयो । कांग्रेसले असहज अवस्था उत्पन्न भएको भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो ।
दुई मुुलुकको हित हुने गरी काम गरौं भन्दा भारतको विरोध वा चीनको विरोध हुन्छ र ?
निश्चिय पनि हुँदैन । यस्तो हाम्रा छिमेकीले पनि सोच्दैनन् होला । भारतमा पनि प्रबुद्ध समूहरुले नेपालप्रति राम्रो सोचाई राख्छन् । तर त्यहाँ केही अनुदारवादी छन् । जसले संस्थापनलाई विभिन्न कुरा लगाएर आफ्नो फाइदाका लागि खेल्छन् ।
नेपालले आफ्नो हित थाहा पाउँदैन । बतासे भएर लैबरी लैमा अल्मलिन्छ भन्ने गरिन्छ हो ?
सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि मानिसहरु रिसाउँछन् तर कालान्तरमा मुलुकलाई त्यो कुराले लाभ दिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । समावेशीता भन्ने शब्द सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर यो आरक्षण पद्धती हो । यसले मुलुकलाई भारतलाई झै तहसनहस पार्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । नेतृत्व निर्णय गर्नबाट डराउँछ भने काम छैन त्यस्तो नेतृत्वको । फाइदा बेफाइदाको मोलतोल गरेर निर्णय लिनु पर्छ । लहरमा, होहल्लामा निर्णय गर्ने परिपाटी नेपालमा छ । पूरै नेपालीले दुःख पाउने निर्णय भइरहेका छन् । आज गरेको निर्णयको भुक्तमान पछिल्ला पीँढीले समेत भोग्नु पर्छ ।